ProFx 5.0 EA ukubuyekeza - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaProFx 5.0 EAProFx 5.0 EA ukubuyekeza
ProFx 5.0 EA ukubuyekeza
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi ProFx 5.0 EA 1
Price: $ 99 (Inani Kunqanyuliwe 1 License, MAHHALA Updates & UKUSEKELWA)
Currency ngababili: Noma yikuphi, kufaka phakathi izinketho, izimpahla kanye nezinkomba (EURUSD ne-GBPUSD zivivinywa)
Ubude besikhathi: Noma yikuphi (i-H4 ne-D1 ihlolwe futhi iphakanyisiwe)
Qaphela: ISIKHATHI SESIKHATHI ESINIKELWE - 60% VALIWE - Intengo ejwayelekile: $ 249
Ukubuyekezwa kwe-ProFx 5.0 EA - Iseluleki Esinenzuzo Se-Forex Sosuku Ne-Swing Trading
ProFx 5.0 EA i-semi-automated Forex uhlelo Ukuhweba futhi FX Expert Advisor ngokusekelwe ezimisweni zesistimu elula.
I-core algorithm yayo ihlaziya Price Action futhi Momentum ngezikhathi eziningi ozimele. Ikhono eliye lafakazelwa ukuthi linikeze inzuzo yokuhweba eqhubekayo ngesikhathi sezimakethe ezihamba phambili nezihambayo.
Njengoba inqubo yokuqapha kanye nokuhlaziya ihamba ngokuzenzakalelayo, ProFx 5.0 EA idinga isikhathi esincane kakhulu isikrini. Uma isofthiwe ithola ukuhlelwa kokuhweba okunokwenzeka okuphezulu, uzokwaziswa ngesikhathi sangempela. Izaziso zokuhweba zinikwe esibukweni (Umsindo nokubukwayo), kanye ne-imeyili kanye nezaziso zefoni ezihlakaniphile.
Lakhelwe ngaphakathi I-Panel Yokuhweba yenza iphakheji iphelele. Kuza nokuphathwa kwemali eyinkimbinkimbi, kubalwa okuhle Misa Ukulahlekelwa futhi Thatha inzuzo amanani akho futhi ikuvumela ukuba ubeke ama-oda ngokuchofoza okukodwa.
ProFx 5.0 EA ingasetshenziselwa Usuku Ukuhweba futhi Ukuhweba kwe-Swing futhi kuhle kubadayisi besikhathi esithile.
The Forex EA isebenza kangcono EURUSD futhi GBPUSD ama-currency pair ngehora le-4 kanye nesikhathi sosuku nosuku.
Uthola ukwesekwa okuphezulu kwe-Notch kusuka ku Forex21 ithimba, inkonzo yabo yamakhasimende ikulungele ukukusiza njalo.
ProFx 5.0 EA kuyinto intuthuko eyingqayizivele yiqembu lobuchwepheshe labathengisi abafuna ukukubona uphumelele!
I-ProFx 5.0 EA - Awaziwa Ngokuthengisa Kwe-Forex?
Yenza ukusetshenziswa kwe ProFx 5.0 EA bese ziphenduka utshalomali yakho ibe GOLD!
I-ProFx 5.0 EA - Mayelana Nokuhweba Logic, Ukusetha nezinye Izidingo
ProFx 5.0 EA ingasetshenziselwa Usuku Ukuhweba futhi Ukuhweba kwe-Swing futhi kuhle kubahwebi besikhathi esithile futhi. Ngaphezu kwalokho, njengoba kulungiswa ngokugcwele kungasetshenziswa kumadivayisi amaningi okuhweba okubandakanya okukhethwa kukho, izimpahla kanye nezinkomba.
Ngokungafani nabanye abathuthukisi, i- Forex21 Ithimba linabathengisi bangempela abadayisa izinto zokuziphilisa. Sizobe sijabule kakhulu ukwabelana ngeziphakamiso zokuhwebelana ezizuzayo. Lokhu kuzokusiza ukuba ube ngumthengisi onolwazi ngaphakathi kwesikhathi esifushane.
Isofthiwe ye-ProFx 5.0 yokuhweba inikeza ngezibonakaliso ezicacile eziphezulu zokuhweba. Hlanganisa lokhu ngezindlela ezenzakalelwe ezenzakale zesakhiwo semakethe futhi uzoshiywa nge-zero ukuqagela.
Yenza ama-setups amakhulu futhi uhlale kude nakho konke okunye. Lokhu kuyisihluthulelo sokuhlala unenzuzo njalo.
njengoba ProFx 5.0 EA I-algorithm iyazivumelanisa nezimo ezimakethe ezishintshayo njalo kuyokwenza umsebenzi ube lula kakhulu.
“Kufanele ngingene kuphi kwezohwebo? Kufanele ngiyibeka kuphi i-SL, i-TP? Kufanele ngihwebe nini, nini? ”
As ProFx 5.0 EA umsebenzisi uzohlala wazi impendulo kuyo yonke leyo mibuzo ngoba Ukubusa kwe-100% okusekelwe.
I-ProFx 5.0 EA - Isayensi Yezokuhweba
Noma ngabe ufuna ukuthatha ukuhweba kwakho kuya ezingeni elilandelayo noma nje uqale umsebenzi wakho wokuhweba, ProFx 5.0 EA kungakusiza futhi uzokusiza ukuba uthuthuke ekubhekisweni kwezinhloso zakho. Kwenza ngempela ukudayisa njengokulula njengoba kuthola. Ukuphumelela kwamaklayenti ethu kubonisa ukuthi kungenye yezinhlelo zokuhweba ezihamba phambili futhi eziphelele kakhulu ezitholakalayo namuhla.
Kodwa futhi kufanele uqaphele ukuthi uyobe uphumelela kangakanani ngakho kuxhomeke kuwe. Uma u:
Landela imithetho yesistimu
Sebenzisa iphephabhuku lokuhweba ukuhlaziya imisebenzi yakho
Sebenzisa amathiphu ethu amakhono wokusebenzisa
Khona-ke uyobe ucindezeleke kakhulu ngalokho okusemandleni nalokhu ProFx 5.0 EA. Ngakolunye uhlangothi, uma ungakwazi ukuzilawula, uqhubeka uphula imithetho yesistimu, wehla kabili noma kubi nakakhulu, kabili phansi ngaphandle kokusebenzisa ukulahleka kokuyeka, ngeke ube nempumelelo enkulu nanoma yisiphi isistimu. Kodwa mhlawumbe usuvele uyakwazi lokho.
The Forex Expert Advisor inemiphumela emihle njalo ngenyanga. Isidingo esincane semali ebhalansi kumthengisi we-FX broker kufanele okungenani sibe ngu-$ 1,000. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukutshala le mali, ungavula i-akhawunti encane ngokutshalwa kwezimali okungenani njenge $ 10.
ProFx 5.0 EA itholakala ngokushesha ngentengo kungakholeki, ie kuphela $ 99. Ngakho ungalindi ukuba adonse ikhophi yakho!
Vakashela iwebhusayithi ye-ProFx 5.0 EA esemthethweni
Ukubukeza kwe-ProFx 5.0
I-ProFx EA Review
I-PROFX I-5.0 EA-BEST FOREX UMSEBENZI WOKUSEBENZA NGESIKHATHI NESIKHATHI SOKUPHATHA KWESIKHATHI SOKUXHUMANA KWESIKHATHI SESIKHATHI - I-60% OFF - I-PRICE EPHAKATHI: $ 249 Othandekayo othandana naye we-Forex, IZINDABA! Ngesikhathi esifushane i-ProFx 5.0 EA iyatholakala ngemali yesikhathi esisodwa se-99.00 USD. Azikho izimali eziphindaphindiwe noma ezinye izinkokhelo ezifihliwe. Thola ulwazi oluthe xaxa namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/profx-5-0-ea-review/I-ProFx 5.0 EA iyi-system ehamba phambili yokuhweba Forex kanye ne-Forex Expert Advisor enokwethenjelwa esekelwe ekulula ukufunda imithetho yesistimu . I-algorithm yayo yangempela ihlaziya isenzo senani kanye nokugxila kuma-multiple frame ozimele. Inqubo ekhona... Funda kabanzi "